Madaxa Arsenal Oo Arsene Wenger Kala Hadlay Ku Soo Laabashada Laabashada Emirates.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Madaxa Arsenal oo Arsene Wenger kala hadlay ku soo laabashada laabashada Emirates.
Madaxa fulinta Arsenal Vinai Venkatesham ayaa lagu soo waramayaa inuu booqasho ugu tagay tababarihii hore ee Gunners Arsene Wenger si uu uga dhaadhiciyo inuu ku laabto Emirates Stadium.
Wenger ayaa ka tagay shaqada Arsenal 2018 kadib 22 sano oo uu ku dhexjiray, laakiin inkasta oo uu Gunners ku hogaamiyay seddex FA Cup shantiisii ​​xilli ciyaareed ee ugu dambeysay ee uu qabtay, sanadihii ugu dambeeyay ee Wenger waxaa hareeyay mudaaharaadyo iyo cadaawad uga timid taageerayaashiisa.
71 jirkaan ayaa la sheegay inuu ka careysan yahay sida mustaqbalkiisa Gunners uu ugu soo dhawaaday, waxaana loo maleynayaa inuu wacad ku maray inuusan waligiis cagta saaridoonin garoonka Emirates Stadium.
Si kastaba ha ahaatee, Daily Mail ayaa warinaysa in Venkatesham uu kala hadlay Wenger wax ku saabsan suurtogalnimada inuu ku laabto Waqooyiga London iyadoo Arsenal ay qorsheyneyso inay muujiso maamuus gaar ah hogaamiyihii hore ee Gunners.
Wenger ayaa ku hogaamiyay Arsenal seddex horyaal oo Premier League ah iyo todobo FA Cup intii uu ku gudajiray xukunkiisa sharafta leh, laakiin Gunners ayaa koob la’aan noqotay waxayna kaalinta lixaad ka galeen kala sareynta horyaalka xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay.
Tababaraha haatan ee Mikel Arteta , Gunners ayaa fadhisa kaalinta 15aad ee kala sarreynta Premier League, in kastoo ciyaaryahanka reer Spain uu ku hogaamiyay Arsenal hanashada FA Cup xagaagii – waana koobkii ugu horreeyay ee kooxda ka dhisan Waqooyiga London ay ku guuleysato tan iyo markii uu ka tagay Wenger.
Previous articleAC Milan ayaa ka badisay Sampdoria siina dheereesatay hogaanka horyaalka Serie A-da
Next articleMo Salah oo Rikoor goolasha ah ka dhigay Yurub kadib Goolkiisa Wolves